Top 3 Ụzọ ndabere iPhone Text Ozi
Onye ọ bụla ụtụtụ, anyị na-eteta na anyị na akwa na anyị ntị na-esote ebe anyị na-ehi ụra. Mgbe ụfọdụ anyị na ọbụna adịghị arahụ ụra na-enweghị texting anyị hụrụ n'anya. A Ilerukwu a ọrụ n'aka na gburugburu ebe obibi ga-ekpughe ndị na-ejide ha igwe eleghị anya texting. A chọpụtara na-ekpughe ọrụ na ozi egwu ná ndụ anyị na ya mere mkpa na-enwe ezi ikpo okwu maka azọpụta ndị a ozi maka ọdịnihu ojiji.
Ozi na-eje ozi dị oké mkpa ọrụ na-enye ihe ọmụma. Na mgbe ọtụtụ color, ozi aghọwo otu n'ime ndị kasị pụrụ ịdabere na ngwaọrụ maka nkwurịta okwu. Nke a bụ obere n'ihi na ha na-enye a n'aka nke na-edebe ihe ndekọ maka ọdịnihu zoro n'adịghị ke ọnụ nkwurịta okwu.
Otú ọ dị, ka oge na-ozi agbasaghị ikpo elu na anyị jupụta ebe nchekwa ekwentị necessitating n'ihu omume dị ka ihichapụ ma ọ bụ ndabere. Nke ikpeazụ bụ ihe masịrị dị ka ọ na-enye ihe ndabere maka nlaghachie kwesịrị a mkpa bilitere. Nlaghachie dị ezigbo mkpa dị ka ozi nwere ike ime ka ị na-ahụ ụgwọ atụrụ maka emebi ma ọ bụ ime ka ị na-eweta a na-eri. (Lee otú naghachi ehichapụ iPhone ozi.)
E nwere atọ n'elu ụzọ na ike ga-eji nkwado ndabere na mpaghara iPhone ozi ederede. Ha na-agụnye:
iCloud azụ elu
Ndabere site iTunes
Ndabere site Wondershare MobileGo.
Ichekwa ndabere ozi na iPhone site iCloud
iCloud bụ a ojii nchekwa na online Mgbakọ na ọrụ site na Apple. Ị naanị mkpa banye ma mepụta akaụntụ. Mgbe na ọ bụ a na-eje ije ogige na ọtụtụ ego nke free ohere nyere maka akwado ya elu. Ọ na-abịa a free ebe nchekwa ohere nke 5GB nke nwere ike mụbara site ịzụta ihe ma ọ dị mkpa. Tinyere a ọrụ enyi na enyi interface ọ na-enye onye nke kasị mma ụzọ nke akwado ozi na-enweghị ukwuu nchegbu.
Mma bụ ihe ọ na-eme ihe kasị mma ebe ọ bụ na otu onye nwere ike ndabere ozi site click nke ekwentị n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla. Otú ọ dị, e nwere ezi ihe na-abịa na-enweghị a flipside na iCloud sokwa dị ka ọ bụ ewekarị ọtụtụ hackers ebe ọ bụ na ihe online isi iyi nke nchekwa.
Ndị na-esonụ ga-agbasoriri iji irè ndabere ozi na iCloud:
Enweta na ntọala na akara ngosi na gị iPhones n'ụlọ ihuenyo
Pịgharịa gaa na ala ruo mgbe ị chọta iCloud
See iCloud menu
Pịa 'nchekwa na ndabere'
Tụgharịa na iCloud azụ elu
Pịa na azụ elu ugbu a dị ka e gosiri ihe atụ n'okpuru.
Ichekwa ndabere ozi site na iTunes
iTunes bụ a media management software mepụtara Apple, ọtụtụ ndị na-ejikọta ya na ọdịyo na video ọdịnaya. Chọta m na iTunes, ga-esi m music on iTunes, ihe ụfọdụ na-nkebi ahịrịokwu na ị ga-anụ gburugburu n'okporo ámá na-music concerts. Ma, ọ bụ na ihe nile ọ pụrụ ime? iTunes e mere na-igosi na ọtụtụ media ọrụ dị ka play music, na agbasa ozi n'ikuku ozi na ihe ndị kasị mkpa nke ihe nile ụlọ ahịa ozi.
iTunes nwere ike iji ihe ndabere ozi site na gị iPhone ebe ọ nwere ike synchronized na a na kọmputa. Yiri iCloud o nwere ọrụ enyi na enyi interface na ike ga-eji mfe ka ndabere ozi na a click nke a abụọ.
Nkwado ndabere na mpaghara ozi site na iTunes, ndị na-esonụ ga-agbasoriri:
Iji otu nke dị ọdụ ụgbọ mmiri nke kọmputa jikọọ USB na ekwentị.
Ozugbo ọ ejikọrọ, na-emeghe iTunes na-aga "faịlụ" taabụ nke iTunes.
Pịa na 'faịlụ' ma họrọ "Devices" dị ka e gosiri n'okpuru.
N'okpuru 'Devices' Họrọ ndabere.
Ichekwa ndabere ozi site na Wondershare MobileGo
Nke a bụ bombshell na ndị ọhụrụ na obodo. Wondershare MobileGo bụ a desktọọpụ software na-akwado ma ndị android usoro na iPhones arụ ọrụ usoro. Ọ bụ ike nke na-arụ multifarious aga-eme sitere na site na-akpọ music, na-ezipu ozi ka desktop, importing na exporting nke data, na-egwu egwuregwu na ndepụta bụ adịghị agwụ agwụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a n'elu gosiri omume na-eje ozi gị dị iche iche mkpa, Wondershare MobileGo nwere ike ịbụ ihe niile ị chọrọ. Olee otú ọ bụ ike ike a ndabere maka m ozi? Ọ dị mfe dị nnọọ eso ndị a mfe nzọụkwụ.
Download usoro ihe omume
Wụnye-agba ọsọ ahụ software.
Jikọọ ekwentị gị na kọmputa site n'iji eriri USB ma ọ wireless netwọk.
Ịhọrọ ozi na mmapụta elu window
Họrọ ebe nchekwa ndabere
Họrọ azụ elu ma hụ na ngwaọrụ na-adịghị mgbagwoju n'oge ndabere usoro.
MobileGo bụ otu-na-otu Android njikwa n'ụzọ dị irè na-enyere gị aka ịmụta gị ama na PC gị. Ozugbo software arụnyere, ọ ga-chọpụta ma na-aghọta ihe ọ bụla Android ngwaọrụ jikọọ na PC site na eriri USB. O si otú na-enye a enweghị nkebi ngwọta maka ebufe data azụ na-apụta n'etiti a ekwentị na kọmputa. The isi atụmatụ na uru nke Wondershare MobileGo agụnye:
Ikike mbubata na mbupụ kọntaktị mfe na conveniently.
Ikike iji tọghata kedi formats ka dakọtara mgbe importing media faịlụ site na PC na ekwentị.
Enweghị nsogbu faịlụ management nke na-agụnye ebufe, n'usoro n'usoro, renaming, ihichapụ wdg
Mfe ndabere kọntaktị, ngwa, ozi gị PC na dị nnọọ a click.
Ugbu a dakọtara na ma android na iOS.
Olee otú Idozi iPhone na-apụghị na nkwado ndabere na iTunes.
Olee otú ndabere SMS na ma android na iOS.
> Resource> iOS Data Recovery> Top 3 Ụzọ ndabere iPhone Text Ozi